Argagixis isa soo dhiibey oo ka hadley waxa iska bedelay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Argagixis isa soo dhiibey oo ka hadley waxa iska bedelay
Waxa magaalada Xudur ee gobolka Bakool lagu soo bandhigey argagixis aan la ogeyn inta Muslimiina ee uu xasuuqay. Ninkan oo lagu magacaabo Colaad C/raxmaan Xerow ayaa sheegay inuu ka toobad keenay dhibkii uu ummada u gaystey.
“Sarkaalkan isa soo dhiibey ayay sheegeen masuuliyiinta gobolka inuu la soo xiriiray kadibna codsaday in la badbaadiyo. Waxa argagixisku sheegtay inuu ka tirsanaa dhiigmiiratada gaalaysa muslimiinta muddo lagu qiyaasay 11 sanno.
Maaha markii ugu horeysay ee dhiigmiirad ka tirsan kooxda xalaashatey dhiigeena ay isa soo dhiibaan inkastoo qaarkood la geeyo xarun dib u sifeyn ah, qaarkood ayaa uga faaiideysta inay dhiig kale sii daadiyaan.